Collagen ee timaha - faa'iidooyinka weyn | Bezzia
Susana godoy | 08/05/2022 18:00 | Quruxda
Dhammaanteen waan maqalnay kolajka waxayna mas'uul ka tahay inay ku darto dabacsanaan badan maqaarkayaga, sidoo kale xoojinta ciddiyaha iyo dabcan, timaha. Ahaanshaha borotiinka dabiiciga ah, waxay faa'iido badan u leedahay jirkeena, laakiin, Ma garanaysaa faa'iidooyinka Collagen ee timaha?
Waxaa jira dawooyin badan oo aan raadino si ay timuhu mar walba u helaan daaweynta ugu fiican. Hagaag, kiiskan waa inaannaan sii eegin sababtoo ah kolajku wuxuu ku siin doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay. In kasta oo jidhku si dabiici ah u soo saaro, haddana waxa lama huraan ah in wakhtiga oo socda awgeed uu yaraado. Markaa ku dar qaddarkaas dheeraadka ah oo ku raaxayso dhammaan faa'iidooyinka.
1 Faa'iidooyinka kolajka ee timaha: waxay ku daraysaa iftiin badan
2 Dib u soo cusboonaysii cidhifyada
3 Waxay ka dhigtaa timahaaga dhumuc weyn waxayna ka hortagtaa daadinta timaha
4 Macasalaama fuuqbaxa
5 timuhu si degdeg ah ayay u kori doonaan
Faa'iidooyinka kolajka ee timaha: waxay ku daraysaa iftiin badan
In yar oo dhalaal ah timahaagu waxay u egtahay hawl fudud, laakiin mar walba sidaas maaha. Tan iyo markii aan aragno, waxaan u baahanahay timaha si dhab ah loo daryeelo oo caafimaad qabaan. In kasta oo aan isku dayno, ma jiraan wax la mid ah sharadka kolajka ee hawshan oo kale. Taasi waa sababta, marka lagu daro daryeelka laftiisa, waxay heli doontaa timahayagu inay yeeshaan iftiin ku habboon. Sida aynu nidhaahno, kaliya markaan aragno waxaynu ogaan doonaa inaynu wajahayno timo caafimaad qaba.
Dib u soo cusboonaysii cidhifyada
Inkastoo iftiinku muhiim yahay, darafyada timuhu kama foga inay ka dambeeyaan. Maadaama sida aan ognahay, waxaan had iyo jeer ka warqabnaa iyaga, in la gooyo, lagu daro fuuqbax dheeraad ah si aysan u furin. Laakiin marmarka qaarkood darafyada kala go'a waa lama huraan. Dabcan, si aad u hubiso inaadan dib u arkin, ma jiraan wax la mid ah kolajka. Haa, waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee xaqiiqo ku noqda indho-beelka.
Waxay ka dhigtaa timahaaga dhumuc weyn waxayna ka hortagtaa daadinta timaha
Waa faa'iidooyin kale oo aan sidoo kale aad u xiisayno. Sababtoo ah haddii aad dareento in timahaagu daciif yihiin oo ay si fudud u daataan, markaa waa inaad ogaataa inay sababi karaan sababo kala duwan. Laakiin marka aysan jirin mid gaar ah, laga yaabee inay tahay sababtoo ah daciifnimadaas si dhakhso ah ayaa loo daweyn karaa iyada oo ay ugu wacan tahay kolajka. Haa, kiiskan Waxa kale oo ay ka dhigi doontaa in uu ka fogaado dhicistiisa isla markaana, siinaysa xoog badan. Markaa timaha ugu khafiifsan ama ugu liita waxay u eegi doonaan xoog iyo dhumuc weyn, oo leh jir. Markaa shaki la'aan, waa wax hubaal ah inaad raadinaysay.
Mid ka mid ah qodobbada aasaasiga ah marka aan ka hadalno daryeelka timaha waa fuuq-celinta. Sababtoo ah mar kasta oo aan xusno daaweyn kale, ma iloobin inaan u baahanahay qallayl la dagaallanka. Tan iyo iyada oo aan dhammaan waa muhiim, tani weli wax yar ka badan. Waxaad u isticmaali kartaa noocyada kala duwan ee alaabooyinka la soo iibsaday iyo kuwa guriga lagu sameeyo labadaba ujeedadan. Laakiin markaan aragno faa'iidooyinka kolajka, waxaan dhammaan ku yeelan doonnaa hal meel. Waxaad ku raaxaysan doontaa timo jilicsan oo nafaqaysan.
timuhu si degdeg ah ayay u kori doonaan
Haddii aad isticmaasho kolajka samaynta a duug madaxa, ka dibna tani waxay ka dhigi doontaa follicles xoog badan. Maxaa noo horseedi doona inaan ogaano sida hoos u dhacu u dhaco iyo iyada, waxaan ogaan doonaa in timuhu ay qaataan xoog badan oo ay si dhakhso ah u koraan. Hubaal marar badan waxaad raadisay xalal korriinka timaha degdega ah, sababtoo ah waxaad ku dhowaatay inaad gacmahaaga ku haysato mahadnaq borotiinkan sida kolajka.
Sideen u isticmaali karaa collagen? Waxa aad ku haysaa noocyo kala duwan sida ampoules ama tablets, kuwaas oo dhakhtarkaagu kuu qori karo. Dabcan waxa kale oo jira shaaha collagen oo aan la iloobin dhammaan waxyaabaha quruxda leh ee sidoo kale leh. Sidaa darteed, dibadda ama gudaha, waxay had iyo jeer noqon doontaa saaxiib weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » 5 faa'iido oo Collagen u leedahay timaha